Ngokuqinisekileyo konke akukho ngaphandle. Emva kwakho konke, njengoko uyazi, akukho bantu abafanelekileyo. Ezinye iziphoso ziyakunqunyulwa kalula, ezinye - akukho. Ngoku siza kuthetha ngeentsilelo zamabhinqa, ezizinto zinyani ngokwenene, kwaye zenziwe ngumfazi ngokwakhe. Ukungaphumeleli kwabasetyhini, okokuqala, nikela ingqalelo ngesondo esomeleleyo, kuba bayayixabisa nayiphi na ibhinqa ebiza ukuba ithatha indawo ethile entliziyweni yomntu. Iingxaki ziyakwazi ukwahlukana zibe zizinto eziphathekayo, eziphathekayo kunye nokuziphatha. Makhe sithethe ngazo zonke iintlobo zeentsilelo zabasetyhini.
Naluphina, nokuba ngowona mfazi uhle kakhulu uhlala ekhangele kwaye ufumanisa ngokwawo ulwaphulo oluninzi. Iingxaki ezingaphandle zinkxalabo yowesifazane ngaphezu kokusilela komlingani wakhe ngokubanzi. Kodwa ubuthathaka bomfanekiso kuselula ukulungisa okanye ubuncwane. Kwaye impawu zifuna ukutshintshwa, kodwa le yinkqubo ende.
Ukungonakali kokubonakala kwayo, loo ntokazi ibhekana nesifuba esincinci, iindawo eziphakamileyo kakhulu, impumlo ende okanye i-chin. Ngomntu, zonke ezi "mpazamo" azibalulekanga. Kukho abantu abaninzi kwaye baninzi kakhulu. Mhlawumbi ngumntu wakho othanda abesifazana ngesifuba esincinci kunye nokuphakamisa iimpumlo. Kule nto, kungcono ukufumana umntu oya kumthanda aze akuxabise nomfanekiso onjalo ukuba kukho i-uvass.
Enye into xa umfazi engamlandeli, enamafutha kwaye ngokuqhelekileyo ayibalekele indlela yokuya kuvocavoca. Ibhinqa elisehlweni kwendoda lingenalo iifomu ezigqibeleleyo, kodwa kufuneka libe nesimo esifanelekileyo. Ukungalungi kulo mzekelo kubayeni kuya kuba "ukunyanzelwa" kwabesetyhini jikelele: amanqindi amaninzi ekhondweni, ezandleni, ukungabikho kwemisipha yomzimba kunye neentimenti ezingaphezulu apho angafanelekanga khona.
Umbono wendlela yokungaphumeleli kwabasetyhini ukusuka kumbono wesilisa kunye nowowesifazane uyahluke ngokupheleleyo. Ibhinqa lingaqwalasela ukungabikho kobuxoki, ububele obugqithiseleyo kulabo abangazange bafanelwe, umnikelo kunye nabanye. Amadoda afumana ezinye iintsilelo zeentombi: ukuthetha ngokugqithiseleyo, ubuvila, ukungabi ncamango kwengqondo, ubuncinci bezithethe, ukuchithwa kwezinto, ukunyaniseka, ukungabikho kwamabhinqa kwimikhwa nokuziphatha, ukunyaniseka okanye ukulula-kwindlela yokuziva, ukuzidla, ukukwazi ukuziphatha ngobuninzi, nangaphezulu.
Amadoda abheka abafazi abancinci kwinqanaba elithile. Ziziphi izinto abafazi abajonga ngayo ukungabikho kwamanani amancinci - ngamadoda amakhulu kunye nakwezinye izinto. Kukho iintsilelo ezinjalo, ezifana namadoda amaninzi, zibachaphazela. Phakathi kwabo sinokuthi:
Isisindo esiphezulu. Amadoda amaninzi ngamabhinqa kunye namantombazana "emzimbeni", nangona ukunyanzeliswa kweendaba kuninzi olunye uhlobo lwabasetyhini. Kakade, asikhulumi ngongqongqo obunzima, ukungabikho kwezemidlalo ebomini kwintombi kunye nemisipha. Oku akukhenkali kubani na.
Amancinci amancinane amabhinqa e-islabosti. Ezi "mpazamo" zifana nabantu abaninzi, ukuba, ngokuqinisekileyo, musa ukuwela imida efanelekileyo. Nayiphi na ubuthakathaka besifazane bunikela umntu ukuba azive engumntu oyinyani - omeleleyo kunye nokuzithemba, kunye nokuzibonakalisa.
U buvila obuncinane. Ukuba le ntokazi ibhinqa ngokugcwele, ngoko ke, oku, akukwamkelekanga. Kodwa ubuvila obuncinane buya kuba khona, kuba ibhinqa elisebenza ngelokugqiba ukupheka, ukupheka, ukuyithengisa - oku kuyilwahlwayo ngokwenene kubantu.
Ukubonakaliswa kweengcamango zesondo ezingenanto. Abasetyhini abaninzi bacinga ukuba kuninzi ukubonisa umnqweno wesini, ukuba umntu akanakukuqonda oku kwaye ukukhululwa ngokwesondo kuyisiphoso. Kodwa eqinisweni, amadoda amaninzi afana nawo xa ibhinqa lakhe libonisa isicwangciso sokulala kunye nobutyebi. Kubo - esi sipho sangempela.
Ubukho bomzimba omncinci. Abaninzi abasetyhini bazama ukukrazula nangona isisu esincinci sesisu, kodwa sikhombisa. Amadoda amaninzi afana neentlobo ezincinci zentombi, abayithandi njengabafazi beentlanzi. Ngaphezulu, ubukho bomzimba obunjalo, kwaye yonke into engokwemvelo, ayinakubi okanye ayikho.
Ngokuqhelekileyo amadoda, sele sele ekhetha umfazi kumfazi omnye okanye omnye kwaye avumelana nokungahambi kwamabhinqa, ufumanisa oko, nangona kubonakala ngathi kuyinto encinci, kodwa kungonakalisa kakhulu ubudlelwane beentsapho. Kule mpazamo emancinci yabafazi kunokubanjelwa oku kulandelayo:
umkhuba wokuzikhumbuza rhoqo okanye ukulawula umntu ngomnxeba (ukukhumbuza abo bafuna nje ingqalelo, kodwa bahlala belawulwa ngabafazi abanomkhuba wokugcina izandla zabo kwi-pulse);
ukuthetha ngeenxeba ezinde kunye neentombi, oodade, unina (kwaye akunandaba ukuba ngamathuba amaxesha umfazi angakwazi ukubuyisela ekhaya izinto);
Imihlangano ende kunye nabahlobo, ingakumbi ebusuku kunye nabangane abangatshatanga;
umkhwa wokubamba umyeni wakhe kunye nokumenza amanqaku athile kunye nabangaphandle (oku kuhlazisa umntu);
umnqweno wokuthabatha umyeni wakhe kuye, kodwa kunokuba amlinde;
ungayicingi ngombono wendoda yakhe kule nto okanye loo mbandela, kwaye ungayiphuliphuli icebiso lakhe elixabisekileyo, uqinisekise ukuba nguye othe tye kwaye uya kuba yindlela efuna ngayo;
uvakalelo oluninzi kunye nokuzihlaziya, ngakumbi kwizinto ezincinci nakubantu, umzekelo, ngenxa yepikili ephukileyo;
ukungafuni ukuthetha ngokuthe ngqo malunga nento intokazi engayithanda ngayo, amacebo onke awakuthandi amadoda kakhulu kwaye enye yezona zinto "zingathandwa".
Ngokuqhelekileyo, ibhinqa elifumene imeko kufuneka lizame ukuzijonga kumyeni wayo, ngamehlo akhe kwaye ngoko umfazi uya kukwazi ukuthetha ukuba ziphi iimpazamo zakhe. Kuhlala kuphela ukuwaphelisa.
Kuba ibhinqa, kubaluleke kakhulu ukuzinyamekela, ukuchonga amandla akho okwenene kunye nobuthathaka. Into ephambili kukuba ukwabelana ngesithandwa yintokazi eyayiyingozi, kwaye ibona umntu ongathandekiyo.
Yenza uvavanyo olulula. Buza amadoda akho aqhelekileyo (abatshatileyo nabangatshatanga ngokuthelekisa) ukuba bacinge ukuba kufanelekile ukukuxelela malunga noko kukhangeleka kubo njengempendulo kwisimo sakho nokubonakala kwakho. Inokubambisana ukuba izimvo zakho ziya kuchithachitha. Umzekelo, ibhinqa licinga ukuba lihle kakhulu xa isebenza, ukuqhubela phambili kwinqanaba le-ladder, lifumana umvuzo omhle kwaye lingazibonela lona, ​​kodwa kumadoda amaninzi ukuzimela kwezoqoqosho kuyisinyathelo sokuqala sokuthintela umyeni wakhe. Kuphela nje ukuphika kwakhe, njengendoda enamandla kunye nomninimzi. Ngoko ke inakho konke "ukungaphumeleli", kuba oko ucinga ukuba yinto enhle kunokungathandwa ngumntu. Kwaye ngokuthe ngqo. Ngokomzekelo, umfazi uyaqiniseka ukuba unomfazi onamaqeshanga omdala obamba ububukeka bakhe, uyangqineka, ucinga ngasese ngophando lweplastiki, kodwa le mpumlo eyenza ukuba yintoni. Le mpumlo ithandwa kakhulu ngumntu.
Kubudlelwane phakathi kwendoda nomfazi akufanele kubekho imingcipheko, ingakumbi ngeendlela zokungaphumeleli. Ukuba ngaba kunjalo, kufuneka sizame ukuzinqumla, kuba ukuba umfazi ulwa neengxaki zakhe (ngakumbi ezo zinto zikhona kwaye zikhusela ukuba aphile, okanye), ngoko umyeni wakhe uya kukwazi ukutshintsha ngokwakhe.
Ukuhleka kunye nomlingiswa womntu
Unokukunceda njani indoda ukujamelana noyiko lwakhe?
Kuthekani ukuba le ndoda ifihlakele kakhulu?
Iimpendulo ezimnandi kwiimpendulo
Unokukunceda njani umfazi ukuba aqhubeke nobundlobongela obuvela kumyeni wakhe
I-Apple pie kwi-oven microwave
Indlela yokukrazula umbala weenwele eziphuzi?
Ukwahlulelwa kweenkcazo kunye neendlela zokulungiselela
I-label of reception and home parties
Amaqanda aqhekezayo kwiiqanda zamanzi
I-spinning whitening: iintlobo, ukuphumelela, ukuchasene
Yintoni i-cyst ovarian, kwaye ziziphi iimpawu zayo?
I-eucharis yeentyantyambo zangaphakathi okanye i-Amazonian lily
Ungayichitha njani i-moles ekhaya?
Indlela yokulungisa imeko enzima emsebenzini